Al Shabaab oo sheegatay Mas’uuliyadda Weeraro ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. – Calamada.com
Al Shabaab oo sheegatay Mas’uuliyadda Weeraro ka dhacay magaalada Dhuusamareeb.
calamada July 14, 2019 1 min read
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayay ku sheegatay mas’uuliyadda laba weerar oo ka dhacay bartamaha magaalada “Mujaahidiinta ayaa howlgallo khasaara lagu gaarsiiyay maleeshiyaadka Mushrikiinta ka fuliyay magaalada Dhuusamareeb ee wilaayada Galguduud” ayaa lagu yiri war kooban oo Al Shabaab kasoo baxay.
Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa sanaddii 2012 sidaan oo kale qarax uga fulisay magaalada Dhuusamareeb waxaana qaraxaas ku dhintay mas’uuliyiin uu kamid ahaa Xildhibaan Seeraar oo katirsanaa baarlamaanka dowladdii Shariif Sheekh Axmed gacan saarna lalahaa dowladda Itoobiya.
Previous: Weeraro Kala Duwan Oo Ka Dhacay Banaadir, Shabeelada Hoose Iyo Jubbada Hoose.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo-11-11-1440 Hijri